Radio Risaala oo Xabsiga Dhexe kasoo saartay wariye lagu xukumay lacaga ganaax ah * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated Mar 2, 2015
Mareeg.com: Wariye Maxamed Cabdi Cali oo ka tirsan shaqaalaha Idaacada Risaala muddo 2 bilood ah ku jiray xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, ayaa maanta dib u helay xuriyadiisa.
Wariyaha ayaa laga soo saaray Xabsiga dhexe ee Xamar, kadib dadaal ay bixiyeen Maamulka iyo shaqaalaha Radio Risaala, sida laga baahiyey idaacadaas.
Maxkamada Gobolka Banaadir, ayaa shalay xukun $500 oo doolar ah ku riday Wariye Maxamed Cabdi Cali, iyadoo sheegtay in la si deynayo isla goorta la bixiyo lacagta ganaaxa ah.
Shaqaalaha Warbaahinta Risaala ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu dib ugu helay xuriyadiisa Wariye Maxamed Cabdi Cali.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shalay wariye Maxamed Cabdi Cali ku xukuntay ganaax lacageed oo dhan $500 dollar, kaasoo maamulka Radio Risaala bixiyey, taasina keentay in maan la sii daayo.
Wariyahaan ayaa horay loogu xiray kiis la xiriiray inuu idaacadda kasii daayey war ku saabsan in qof looga shakiyey inuu qabo cuduka Ebola lagu arkay degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.